﻿ma Inaad Dhinto Miisankada? Akhriso Qormadan
Waa daawooyin loogu tala galay in ay dabiiciga a-ha ugu tala galay in loo maareeyo, rabitaanka cuntada that is waxay am nuugista nafaqada. Haddii ay calaamadaha neeftaada ay ka duwan yahiin kuwa caadiga ah (uusan caadi ahayn) ama aad qabtid calaamado dheeri ah, waxaa laguu gudbin karaa qaybta xray-ga sidii raajo lagaa saaro xabadka. Haddii uu sii joogto ah kuu , waxaa lagu siin doonaa kale ee ku jiro lagu magacaabo that is qabto inhaled corticosteroid. Waxaa ahaan lagula talin doonaa inaad qaadatid labo maalintiiba oo corticosteroid sidii hortago in mar labaad dhaco that is kugu.
Si aad u samaysid waxaa baahan yahay inaad cunto that is cuntid caafimaad leh iyo inaad si ah u jimicsi that is samaysid. Inkastoo oo halis keeni karo, haddii aad qabtid neef aad u xun, waa inaad qaadatid tallal sanadeedka ifilada (durayga). Waa inaad xitta qaadataa tallaalka ka hortagga pneumococcal - oo oh jeermis keena xanuunka sambabaha (pneumonia), meningitis iyo bukashada dhiigga.
Waxaa calaamadaha neefta bilaabi karo waxyaabo alarjiyo keeno (waxyaabaha keeno waxyeelayn alarjiyo ah) sida geedaha, cayayaanka yar-yar ee guriga, qiiqa sigaarka, qiiqa alaabta kiimikada, noocyo daawo sida asbiriinka, ama kuwa betablockers loo yaqaan. Kale ee karo waa bukasho, wel'wel, khudaar noocyo ah cunto, iyo gaar ah jawi.
Previous Post ﻿wsq Implement Incident Management Process Program Next Post ﻿gotham Family Pictures